कोरोनाभाइरसले छोराको मृत्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाभाइरसले छोराको मृत्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै !
कोरोनाभाइरसले छोराको मृत्यु भएपछि रातभर रुँदै बसे परिवार, बिहान छोरा जिउँदै !
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसका कारण छोराको मृत्यु भएको खबर पाएपछि परिवार शोकमग्न भयो । बेलुकीपख खबर आएको थियो । रातभर परिवार रुँदै बसे । बिहान जब उनीहरु छोराको शव हेरे त्यसपछि बल्ल थाहा भयो उनीहरुका छोराको त मृत्यु भएकै थिएन । स्वास्थ्य विभाग र सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीका कारण यस्तो घटना भएको पाइएको छ । घटना उत्तर प्रदेशको संत कबीर नगर जिल्लाको भएको इण्डिया टुडेले लेखेको छ ।
घटना विवरणअनुसार एक पितालाई पुलिसले फोन गरेर उनका छोराको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो । सूचना पनि परिवार शव लिन गए । केही बेरमै शव सील प्याक गरेर परिवारलाई दिइयो । रातभर परिवार र गाउँलेहरु शोकमग्न रहे । बिहान पिता आफ्ना अर्का छोराको साथमा घाटमा गए । शव जलाउनुभन्दा पहिले पिताले मृतकको अनुहार हेरे त्यसपछि भने पिता र पुलिसको होस उड्यो ।
मृतक ती पिताका छोरा थिएनन् । त्यो शव अर्कै बिरामीको थियो । कोरोना संक्रमितको शव भएको कारणले शवको अन्तिम संस्कारको लागि त्यही किसिमको सुरक्षा उपायसहित व्यवस्था गरिएको थियो । शवलाई अग्नी दिने बेला पितालाई मृतकको शरीर देखेपछि केही शंका भयो । उनले शवको अनुहार हेरेपछि भने मृतक उनका छोरा नभएको पुष्टि भयो । शव अर्कै युवकको थियो जो केही समय पहिले मात्र मुम्बइबाट फर्केका थिए र उनी संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । दुवै युवकको एउटै अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो र दुईको बेड नजिकै थियो ।
लमही – काठमाडौँमा बहिनीज्वाइँको उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं – ४ का भीमबहादुर वली कोरोनालाई जितेर घर फर्किनुभएको छ ।
काठमाडौँबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एम्बुलेन्सबाट आज घर फर्किएका वलीलाई रक्षाचौरस्थित क्वारेन्टिनमा नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले फूलमालाले स्वागत गरे। ‘‘कोरोना जित्नुभएकामा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई ’’, नगर प्रमुख पाण्डेले भने। उनले कोरोनालाई उच्च मनोबल बनाए सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश सबैलाई दिन पनि उनलाई आग्रह गरे।
नगर प्रमुख पाण्डेले वलीलाई पोषण आहारका लागि अण्डा, स्वास्थ्य सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुभएको थियो । लामो समय बहिनीज्वाइँको उपचारका लागि काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बसेका ४६ वर्षीय वलीलाई त्यही बेला कोरोना संक्रमण देखिएको हो । स्वाब लिएको दुई दिनमै केही काम छ भन्दै पाटन अस्पताल पुर्याइएपछि स्वास्थ्यकर्मीले एकाएक कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिँदा निकै डर लागेको उनले आफ्नो अनुभव बताए।
यही जेठ ३ गते कोरोना संक्रमित भएको खबर पाएका वलीले जेठ १२ गतेसम्म तीन पटक जाँच गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ भन्ने खबर पाइएको बताए। ‘‘हल्ला धेरै भए पनि निको हुने रोग रहेछ, नौ दिनमै म ठीक भएँ’’, उनले भने।
BREAKING..तीन पटक आरडिटी टेष्ट पोजिटिभ देखिएकी वीरगन्जकी युवतीको मृत्यु
कोरोनामुक्त भएका प्रमोद खरेल भन्छन् : पैसा नभएर कसैले मर्न नपरोस्
थप ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,संक्रमित संख्या ४८७ पुग्यो
दाङमा आफ्नै बसभित्र वि’ष सेवन गरी गाडी धनीले गरे आ’त्मह’त्या